Shaashadda Jelly waa dhibaato saameyneysa iPad -ka cusub | Wararka IPhone
Shaashadda u eg Jelly waa dhibaato saameyneysa iPad-ka cusub
Mararka qaarkood dhibaatooyinka shaashadaha aaladuhu waxay u tarjumaan daadinta iftiinka caadiga ah ama sida ay u muuqato inay ka dhacayaan jiilka cusub ee iPad mini ee cusub, iyadoo shaashaduhu muujinayaan "Barakac Gelatinous" oo noqonaya tarjumaadda "duubista jelly » oo Ingiriis ah.
Dhibaatadani uma muuqato inay si isku mid ah u saamaynayso dhammaan adeegsadayaasha tanna waxaan ula jeednaa marka la eego isticmaalaha laftiisa ee ma aha iPad mini -ka cusub. Dhibaatadu waxay tahay marka aad fartaada ku dhaqaajiso shaashadda, qoraalku wuxuu u eg yahay mid gariiraya wuxuuna saamayn ku yeelanayaa dadka isticmaala qaar ka badan kuwa kale. Muuqaal ahaan waan la qabsan karnaa tanna sidaas ayay ku sii jirtaa, laakiin adeegsadayaal badan ayaa wareeri kara ama dareemi kara xumaan dhibaatadan shaashadda.
Un tweet -kii uu soo dhigay tifaftiraha Verge Dieter Bohn, waxay si fiican u muujineysaa saamaynta shaashadaha mini iPad:
Halkaan waxaa ah fiidiyoow mo-gaab ah oo lagu riixayo iPadka Min waxaan ka gaabiyey XATAA DHAMAAD talaabo qaab-dhismeed ah. U fiirso sida midigtu kor ugu dhaqso badan tahay bidixda.
Isticmaalka caadiga ah si dhib yar ayaad u aragtaa, laakiin had iyo jeer waxay noqotaa mid la dareemo. Muuqaalka guud ahaan wuu iska tagaa pic.twitter.com/iq9LGJzsDI
Waqtigan xaadirka ah dhibaatadu uma muuqato kaliya dhowr unug oo gaar ah, waxay ka badan tahay dhibaato baahsan aaladaha badankood. Tan waxaa loo muujiyaa inay u socoto si tartiib -tartiib ah qaybta qoraalka oo dhinac ka dhinac ah waqtiga la xoqdo.
Wax walba waxay tilmaamayaan inay tahay dhibaato guud dhammaan aaladaha cusub iyo hadda Wali waa la arki doonaa haddii ay sabab u tahay guuldarada guddiga LCD laftiisa lagu rakibay iPad mini ama ay ku guuldaraysatay firmware ama software. Si kastaba xaalku ha ahaadee, iPad Pro ama iPhone -ka cusub ee leh cabbirka cabbirka ee 120Hz ma laha dhibaatadan sababtuna waa heerka cusboonaysiinta sare.
Hal isticmaale ayaa laga yaabaa inuu dareemo wax ka badan "guuldaradaan" iyo qaar badan xitaa waxay noqon kartaa dhibaato dawakhaad marka la duubayo. Si kastaba xaalku ha ahaadee, wax walba waxay tilmaamayaan in dhibaatadan ay ka jirto aaladaha cusub waxaanan arki doonaa sida arrinku u socdo. Miyaad leedahay mid ka mid ah iPad mini -kan cusub? Miyaad aragtaa saamaynta dhaqdhaqaaqa jelly-u eg? Aragtidaada uga tag faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Shaashadda u eg Jelly waa dhibaato saameyneysa iPad-ka cusub
Tani waa sida iska -caabbinta cusub ee iPhone 13 u dhacdo oo u naxdo
Xalka furitaanka guuldarrada ee Apple Watch ayaa dhowaan imaan doonta